Ọdịnaya Na-abụghị Igwe Nchọgharị | Martech Zone
Ọdịnaya karịrị Engine Search
Thursday, August 9, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ihe omuma a site na InboundWriter nwere ike ịbụ nne nke ozi ọdịnaya azụmaahịa mana m hụrụ ya n'anya! N'ozuzu ya, ekwenyere m na isi ihe na infographic bụ na omume nkịtị nke ịnọdụ ala na ihe nchọgharị ma tinye mkpụrụ okwu di na nwunye na ntanetị ọchụchọ na-agbanwe. Ọchịchọ mmadụ na ọchụchọ mkpanaka na-akpali ọtụtụ itinye aka.
Otu akara ederede pụtara ìhè bụ na ahịrịokwu okwu 3 nwere mgbanwe dị elu karịa karịa otu mkpụrụ okwu ma ọ bụ mkpụrụ okwu ole na ole. Agaghị achọta aghụghọ nke ntụgharị ugbu a, ọ bụ otu esi edebe onye ahụ na saịtị gị ma wulite ntụkwasị obi na ha. Nchọpụta ọdịnaya bụ isi ihe na usoro ịre ahịa ọdịnaya ọ bụla!
Na-adịghị mma SEO Ọrụ!
Aug 9, 2012 na 1:52 PM
Hi Eric, Anyị emeziela ole na ole ederede na chinchi na infographic ebe ọ bụ na ị jidere ya. M tụrụ aro ka ịme ngwa ngwa.